बिग ब्यास लिगकै बीचमा पिता गुमाएका राशिद खानले गरे सबैलाई रुवाउने ट्वीट ! «
बिग ब्यास लिगकै बीचमा पिता गुमाएका राशिद खानले गरे सबैलाई रुवाउने ट्वीट !
काठमाडौँ, १८ पुस । अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित बिग ब्यास लिगमा एडलेड स्ट्राइकर्सबाट अफगानिस्तानका लेग स्पिनर रसिद खान पनि खेलिरहेका छन् । खेल जारी रहेकै बेला उनका बाबु हाजी खलिलको आइतबार पाकिस्तानको पेशावरमा निधन भएको छ । बाबुको निधन भएको अर्को दिन सोमबार पनि रसिदले आफु अनुबन्धित रहेको टिमबाट सिड्नी थन्डर्सविरूद्धको खेल खेले र २ विकेट पनि लिए ।
रसिदले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै उनको बाबुको निधनपश्चात पनि खेल खेलिरहे । यद्यपी उनले विकेट लिंदा अरुबेला झैँ सेलिब्रेसन भने गरेनन् । रसिद अहिले विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट बलरमध्ये एक हुन् । टि-ट्वान्टी फर्म्याटका बलरमा उनी पहिलो नम्बरमा छन् ।
खेलकैबीच बाबुलाई गुमाउनु परेपछि रसिदले दिबंगत बाबुलाई सम्झंदै मार्मिक ट्वीट गरे – ‘आज मैले जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति गुमाएँ। कहिल्यै ननिभ्ने दीयो, मेरा बुवा! हामी सबै अल्लाहका हौं र उनैमा समाहित हुन्छौं। मैले बल्ल थाहा पाएँ तपाईंले किन सधैं मलाई बलियो बन् भन्नुहुन्थ्यो। तपाईंलाई थाहा रैछ- तपाईंलाई गुमाउनुको पीडा सहन मलाई त्यो शक्ति चाहिन्छ। सधैं मेरो प्रार्थनामा रहनुहुनेछ! तपाईंको अभाव खट्किने छ !’